Ny Power of People dia manaporofo fa malaza amin'ny BestCities Global Forum ho avy eto Bogota
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny Power of People dia manaporofo fa malaza amin'ny BestCities Global Forum ho avy eto Bogota
Ireo mpitarika dia hanao lahateny, atrikasa ary programa ary koa mianatra momba ny faritra sy ny kolontsaina Amerika Latina amin'ny BestCities Global Forum izay hatao ao Bogota.
Ireo mpitarika dia hanao lahateny, atrikasa ary programa ary koa mianatra momba ny faritra sy ny kolontsaina Amerika Latina amin'ny BestCities Global Forum izay hatao ao Bogota amin'ny volana ho avy.
Nampiantranoin'ny Greater Bogotá Convention Bureau (GBCB) miaraka amin'ny BestCities Global Alliance, ny Forum dia hijery ny fomba hanampian'ny fiaraha-miasa amin'ny fananganana vondrom-piarahamonina manerantany. Hotontosaina mandritra ny efatra andro ny dinika, manomboka amin'ny 9 Desambra ao amin'ny Grand Hyatt Bogotá ary hitohy amin'ny Ivotoerana Fivoriamben'ny Ágora Bogotá, roa kilaometatra monja avy eo afovoan-tanàna manan-tantara.
Ny lohahevitra amin'ity taona ity, Herin'ny Vahoaka, dia mankalaza ny andraikitra tsy manam-paharoa anjaran'ny olona amin'ny fanovana sy fandrosoana lehibe eo amin'ny sehatry ny fivoriana sy ny hetsika. Nandritra izay roa taona lasa izay, ny BestCities Global Forum dia nijery ny fiantraikan'ny lova sy ny maha-zava-dehibe ny fananganana tetezana ara-kolontsaina, na eo aza izany, amin'ity taona ity, ny olona no ho fototry ny hafatra.
Ny fotoam-pivoriana Bogotá dia hanome ny solontena ny fotoana hitrandrahana ny fiasan'ny firaisan-kinan-toerana maneran-tany ary hahita ny fomba ahafahany manasoa ireo fikambanana sy hetsika ataon'izy ireo. Avy amin'ny fahazoana miditra amin'ny tamba-jotra manerantany sy ny fizarana fahalalana mangarahara eo amin'ny tananan'ny mpiara-miombon'antoka, ny fivoriana mandritra ny efatra andro dia hanome aingam-panahy ireo fikambanana hamorona fivoriana lehibe kokoa sy tsara kokoa ary misy akony kokoa.
Ankoatr'izay, hanana fotoana tambajotra sarobidy miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka eo an-toerana izy ireo miaraka amin'ny toeran'ireo mpiara-miombon'antoka BestCities 12 - Berlin, Bogotá, Cape Town, Copenhagen, Dubai, Edinburgh, Houston, Madrid, Melbourne, Singapore, Tokyo ary Vancouver, manokatra ny fahalalany miaraka.
Ny BestCities Global Forum fahatelo dia miorina amin'ny fanombanana ny valin'ny fanehoan-kevitry ny solontena 100% tsara tamin'ireo forum roa teo aloha tany Dubai 2016 sy Tokyo 2017; ary hahita ireo solontena hanararaotra ny toeran'ity mpampiantrano ity amin'ity taona ity satria miaina an-toerana an'i Bogotá izy ireo. Hetsika ara-kolotsaina isan-karazany no nampidirina tao anatin'ny fandaharana hanomezana ny mpanatrika fotoana hijerena ny lova tokana sy mahaliana an'i Bogotá. Hisy ihany koa ny fitsidihana safidy amin'ny toeram-pivarotana hahafahan'ny mpandray anjara manararaotra manangona hevi-baovao momba ny tanàna sy ny andrim-panjakana misy azy.
Paul Vallee, Tale mpitantana ny BestCities Global Alliance, hoy izy: “Miasa amin'ny sehatra izay ivon'ny olona ny zavatra rehetra ataontsika izahay - izy ireo no votoatin'ity indostria ity, ary faly izahay mandray ireo fikambanana sy solontena marobe sy isan-karazany amin'ny BestCities Global Forum amin'ity taona ity Bogotá.
“Ny BestCities Global Forum dia hetsika kintana volamena misy eo aminay ary tsy hampiseho fotsiny izay zavatra hatolotry ny tanàna malaza ao Bogotá, fa hanolotra seminera sy atrikasa miavaka sy mahaliana izay hampivelatra ny fahaizan'izy ireo izay azon'izy ireo atao ampiharo mivantana amin'ny asany isan'andro. Ary koa misy sain-tsaina mahafinaritra mahafinaritra miaraka amin'ny fizarana fahalalana, ireo solontena dia hanana fotoana hianarana amin'ny namana ary hanitatra ny tamba-jotra.
“Mampahery ny mahita fikambanana maro be misoratra anarana ao amin'ny forum any Bogotá, ny hany mpikambana amerikana latinina ao amin'ny Alliance. Ny fomba fijerin'izy ireo dia hanasongadinana ny asa manentana ny fanahy avy amin'ny toerana itodiana ary matoky izahay fa hanako any amin'ny fikambanana rehetra izany, na inona na inona sehatra na kaontinanta.
Jorge Mario Díaz, filohan'ny Birao an'ny Birao Fivoriamben'ny Greater Bogotá nanao hoe: “Faly eraky ny tanàna ny hanao Forum Global amin'ity taona ity. Ny olona rehetra dia sahirana manomana sy mametraka izay azony atao ao ambadik'izany mba hahatonga ny Forum tsy ho hay hadinoina sy hampianarana.
“Mino mafy izahay fa ny olona tsirairay dia manana fahefana hanao fanovana ifotony, izay afaka mamolavola ny ho avy ary manisy fiovana tsara. Ny olona no votoatin'ity indostria ity, ary ity indostria ity dia sambo iray hahazoana vokatra lehibe kokoa sy lehibe kokoa. Amin'ny maha-mpiara-miasa dia te-hanasongadinana ny tena herin'ny olona ao anatiny izahay ary hino fa hanampy antsika hahatratra izany ny forum. ”
"Faly aho fa nitondra an'ity dinika malaza ity ho an'ny tanànantsika, ary afaka mizara ireo olona sy kolontsaina mahafinaritra any Amerika Latina amin'ireo tonga."
Hiverina amin'ny taona faharoa, Sean Blair, tompon'ny ProMeet, dia hanamora ny Forum amin'ity taona ity. Toy ny tamin'ny taona teo aloha, ny solontena dia hanatrika Dinner Ambassadeur hihaona amin'ireo mpiara-miasa aminy, masoivoho eo an-toerana ary fifandraisana akaiky manome azy ireo fotoana hananganana fifandraisana ary hampitombo ny tambajotran'izy ireo manerana an'izao tontolo izao. Miverina indray ny fivorian'ny City Café malaza sy ny vinan'ny tambajotra sosialy miaraka amin'ireo mpiaramiasa 12 an'ny BestCities.
Ny Forum amin'ity taona ity dia hahita mpandahateny mahatalanjona ao anatin'izany:
Rick Antonson «mpanatanteraka tsy nahy» ary Tale jeneralin'ny fizahan-tany Vancouver taloha. Rehefa nitety an'izao tontolo izao izy, nanoratra boky dimy ary nitana ny anjara asany tamin'ny zava-bita malaza indrindra tany Canada, dia hitondra ny làlany tsy dia manaraka firy amin'ny fandaharana i Rick raha hiresaka ny fotoanany tao amin'ny fizahantany Vancouver.
Lina Tangarife, talen'ny andraikitra ara-tsosialy ao amin'ny Alliance Alliance of Uniandinos. Manam-pahaizana amin'ny fitantanana stratejika ny Fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena, nampiasa ny herin'ny vahoaka izy tamin'ny fanamafisana ny asa an-tsitrapo ao anatin'ny orinasa, governemanta ary fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana.
Neyder Culchac, tanora mpitarika. Avy amin'ny faritra antsoina hoe Putumayo any atsimo andrefan'ny Colombia, nihalehibe voahodidin'ny fifanolanana i Neyder saingy tapa-kevitra ny tsy hamela azy hisakana azy tsy hanao fanovana tsara izy. Mamorona fandraisana andraikitra manova ny fiainan'ny fianakaviana 480 ao anatin'ny fiarahamoniny i Neyder dia hizara ny tantaram-piainany ary hampianatra ireo solontena amin'ny herin'ny finiavana.
Andrew Gómez, manam-pahaizana momba ny serasera. Nandritra ny traikefa nandritra ny roapolo taona teo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha amin'ny serasera, niompana tamin'ny olana toy ny fitantanana krizy, fampitambarana, raharaham-bahoaka ary raharaha orinasa i Andrés. Manomboka amin'ny maha mpanao gazety azy izao dia manomana, mamolavola ary manatanteraka ny paikadim-pifandraisana ho an'ny orinasa izy izao.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny BestCities ary haharaka ny vaovao farany nivoaka avy amin'ny BestCities Global Forum amin'ny herinandro ho avy bestcities.net.
Seasons efatra hipoitra eo amin'ny superyacht KISMET
An'arivony maro no nanatrika ny Konseran'ny K-Pop MBC tao Guam